Thenga i-powder ye-BMS-564929 (627530-84-1) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / SARMS / I-BMS-564929 powder
SKU: 627530-84-1. Udidi: SARMS
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-BMS-564929 powder (627530-84-1), phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-BMS-564929 powder i-modorator ye-androgen receptor yokukhetha uphando, ephuhliswa nguBristol-Myers Squibb ukuze unyango lweempawu zokunciphisa ukukhula kwe-agero kumadoda ("kunye nexesha"). Ezi zimpawu zingabandakanywa ukunyanzeliswa, ukulahleka kobunzima bomzimba kunye namandla, ukunciphisa i-libido kunye ne-osteoporosis. Ngokusekelwe kwezi ziphumo, i-BBMS-564929 powder ibonakala i-SARM efanelekileyo ye-anabolic
I-BMS-564929 powder (627530-84-1) kumjikelezo womzimba
Amagama e-BMS-564929 powder
Ukusetyenziswa kwe-BMS-564929 powder
I-BMS-564929 powder iyinamandla kakhulu, i-oralally active, nonsteroidal tissue selective androgen receptor (AR). I-BMS-564929 powder yi-subnanomolar AR i-agonist in vitro, ikhethe kakhulu i-AR kunye namanye ama-hormone receptors, kwaye imibukiso ayikho into ebalulekileyo kunye ne-SHBG okanye i-aromatase. Izifundo zeempendulo zengxoworho kwiimvumi zindoda ziboniswa ukuba i-BMS-564929 powder ebomvu inamandla kakhulu kune testosterone (T) ekuvuseleleni ukukhula kwe-leverator muscle, kwaye ngokungafani ne-T, ikhethe kakhulu imisipha kunye ne-prostate.
I-BMS-564,929 yenye yekhampani njengamanje kwiimvavanyo zesikliniki zakuqala zomntu, okuyi-aconist esebenzayo ngomlomo, enamandla kwaye ekhethiweyo ye-androgen receptors (i-Ki 2.1nM, i-20x ekhethiweyo yokusebenza kwezicubu ze-muscle ngaphezu kwe-prostate) kunye nokufundwa kweekota ezibonisiweyo ukumelana nokunciphisa ubunzima be-muscle ngexesha, kwaye kwizinga eliphezulu liye landa ukunyuka kwesisundu, ngaphandle kokuchaphazela kakhulu iifreate ze-prostate. Kodwa kunjalo kunciphisa kakhulu amanqanaba e-hormone ye-luteinizing, ibe yi-33x eyinkqantosi yokuxinzelela ngaphezu kwe-testosterone, eyinokuba yingxaki ebantwini tyenziswa kliniki.
I-BMS-564929 powder eluhlaza ibopha kakuhle kwi-androgen receptor kwaye ingabi kwenye i-receiver receptors. I-BMS-564929 powder ayinakho ukusebenzisana ne-SHBG kwaye ayiyikuvimbela i-aromatase. Ukuvavanya neerati kubonisa umsebenzi ongcono we-anabolic ngoko-testosterone propionate kumlinganiselo ofanayo kunye nomsebenzi ophantsi we-androgenic. Kwimilinganiselo ephezulu i-BMS-564929 powder eluhlaza inqanda i-hypothalamus kunye \_ okanye i-pituary kwaye ngale ndlela ihlisa ukukhutshwa kwe-LH ne-FSH.
I-X-ray yobunzima be-BMS-564929 powder kunye neLBD ye-receptor ye-androgen ibonisa ukubahluko phakathi kwe-BMS-564929 powder oluhlaza kunye ne-dihydrotestosterone ekusebenzisaneni kwabo neLBD ye-receptor. Ezi zintlukwano zibonakala zikhulu ngokwaneleyo ukwenzela ukuba ukuhanjiswa kwefuthe le-anabolic kwiimisipha kwaye kungekhona umphumo we-androgenic kwi-prostate. Akukacaci ngokucacileyo indlela yokuchaza zonke iintlukwano.
I-BMS-564929 powder itholakale ngomlomo kwaye utshintsho oluthile luhamba kancane kwi-proionamide yeSARM. Isiqingatha sexesha lokuphila siyahluka kwi-8 ukuya kwii-14 iiyure, kwaye i-dose ephantsi inokwenzeka.
Isexwayiso kwi-BMS-564929 powder
I-BMS-564929 powder yindlela yokukhetha i-androgen receptor modulator (SARM) ephuhliswa nguBristol-Myers Squibb unyango lweempawu zokunciphisa amanqanaba e-androgen kumadoda. Ezi zimpawu zingabandakanya ukuxinezeleka, ukulahlekelwa kwemisipha kunye namandla, ukunciphisa i-libido kunye ne-osteoporosis. Unyango oluneextogenone olusebenzayo lusebenza ngokumalunga nale mpawu kodwa ludibaniswa neloluhlu lwemiphumo emibi, eyona nto ibaluleke kakhulu yokwandiswa kweprotrate gland, engakhokelela kwi-prostatic hypertrophy kunye nomdlavuza wesibeletho. Oku kuthetha ukuba kukho imfuno yekliniki yokukhetha i-androgen receptor-modulators, eyenza imiphumo ye-anabolic kwezinye iisculi ezinjenge-muscle kunye neethambo, kodwa ngaphandle kwe-androgen receptors kwi-prostate.
I-BMS-564929 powder iyimoduli ye-androgen ye-receptor (AR) ne-Ki value ye-2.11 ± 0.16 nM.
I-AR iyinhlobo ye-receptor yamandla enyukliya eyenziwa ngama-hormone ne-androgenic, i-testosterone, okanye i-dihydrotestosterone. Umsebenzi obalulekileyo ulawula ukuthetha kwemfuza.
I-BMS-564929 powder eluhlaza ngumzimba we-muscle-tissu e-AR nge-bicyclic structure ye-hydantoin. I-BMS-564929 powder i malunga ne-400-ngokukhethwa ngokukhethwa kwe-AR kunye ne-PR kwaye ngaphezu kwe-1000 ngokukhethwa kwe-AR kunye ne-GR, MR kunye ne-ERα kunye ne-β. Kwi-C2C12 umgca weseli ye-cell, i-BMS-564929 powder eluhlaza ibonisa ubuchule be-0.44 ± 0.03 nM xa kuthelekiswa no-2.81 ± 0.48 nM kulinganiswa kwe testosterone.
Ngama-rats e-castrated e-castrated, i-BMS-564929 powder ebomvu inamandla ngaphezu kwe-testosterone (T) ekukhuthazeni ukukhula kwe-leverator muscle, kwaye ikhethe kakhulu imisipha kunye neProstate. Ngenxa yomsebenzi wayo omlomo kunye nokukhethwa kwezicubu, i-BMS-564929 powder kulindeleke ukuba ivelise iziphumo zeekliniki ezincedo kwimisipha kunye nezinye iisculi ngendlela efanelekileyo yokukhusela.
I-BMS-564929 Powder Raw
I-BMS-564929 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-BMS-564929 powder kwi-AASraw
I-BMS-564929 Raw Powder Recipes:
MK 677 (Ibutamoren) ipowder